စကော့တလန်၊ ဂလက်စဂေါမြို့ကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ COP26 ရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ။ (အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၂၁)
အခု Glasgow မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဥတုရာသီဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂထိပ်သီးညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လိုက်နာဖို့ ကတိကဝတ်တွေကို ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစည်းအဝေးအတွက် မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ အပြိုင်အစီရင်ခံစာတင်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ကောင်စီအစီရင်ခံစာကို အစည်းအဝေးက လက်ခံထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၃၁ ကစပြီး အခု နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်အထိ UK ကလက်ခံကျင်းပပေးနေတဲ့ COP26 (ခေါ်) ဒီထိပ်သီးပွဲအတွင်း မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကိုဝင်းမင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲလက်ခံကျင်းပတဲ့ အိမ်ရှင် UK နိုင်ငံကို သုတေသနအတွက်ရောက်နေတဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ စိမ်းလမ်းအမိမြေအဖွဲ့က အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးဝင်းမျိုးသူက မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအခြေအနေကို အခုလို စရှင်းပြပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံက အဓိကသက်ဆိုင်တာကတော့ NDC လို့ခေါ်တဲ့ report ကြီးပေါ့ဗျာ။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာ နိုင်ငံအလိုက်တာဝန်ယူမယ့် ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေကို ရေးဆွဲနေပါတယ်ဆိုတာမှာ ကျနော်လည်း အစိတ်အပိုင်းတခုအနေနဲ့ ပါခဲ့တာတွေ။ အဓိက တပိုင်းကတော့ သစ်တောတွေ ပျက်စီးပြုန်းတီးတာကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အပိုင်း ဒါလျာထားချက်တွေမှာလည်း ၂၀၃၀ မှာ Zero Deforestation လို့ခေါ်တဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို လုံးဝလျှော့ချသွားမယ်လို့၊ဒီလိုမျိုးလျာထားချက်ဆိုတော့ ဆယ်နှစ်ပဲ ကျန်တော့တာပေါ့ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံက သစ်တောပြုန်းတီးမှုမှာ ကမ္ဘာမှာ အခု ၂၀၂၁ ပေါ့ဗျာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမပြောင်းလဲခင်တုန်းက အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်။ အခုလိုမျိုး နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် လူတွေ စီးပွါးရေးကျသွားရင် သဘာဝသယံဇာတပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေရတဲ့အခါကျတော့ ဒီ သစ်တောပြုန်းတီးမှုဟာ ပိုမြန်လာမယ်လို့ ယူဆစရာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် တဘက်မှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို လျှော့ချမယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ လက်တွေ့မှာ လိုက်လုပ်ဖို့ခက်တဲ့၊ ပိုအခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။
NUG သယံဇာတနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ တူးခေါင်ကတော့ မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ခွင့်မရဖို့ အရင်အစီရင်ခံစာ စတင်ကတည်းက ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် ခက်ခဲခဲ့ပုံကို အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“COP26 က ကျနော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ Credential Issue ကြိုးစားထားတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် COP 26 ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရပေါ့နော်- နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲ မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Focal Person သူတို့ရှိတယ်လေ။ အဲဒီ Focal Person က Non-CDM ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့ရဲ့ System မှာကအဲဒီ Focal Person ကနေ ပေးပို့တဲ့စာကိုပဲ လက်ခံတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ကြိုးစားပေမယ့်လို့အခက်အခဲလေးတွေတော့ ရှိသွားတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အဘက်ဘက်ကနေ အားလုံးကတော့ ဝိုင်းပြီးတော့ ကြိုးစားပေးကြပါတယ်။ CSO တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့မြန်မာတွေ။ သီးသန်းဒီ (NUG) နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကနေ ခန့်ထားတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ထားတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ သမ္မတကြီးပေါ့-ယာယီသမ္မတအနေနဲ့ Statement ထုတ်တဲ့သဘောမျိုးတော့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားထားတာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီတော့ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်း NUG ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးရဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ နည်းပညာအကြံပေးက အခုလို ဆက်ရှင်းပြပါတယ်။
“UNFCCC ရဲ့ System ကြီးမှာ NDC လို့ခေါ်တဲ့ Nationally Determined Contribution ဆိုပြီးကာမှ နိုင်ငံတွေကနေ ကိုယ်တွေလာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကွန်မစ်မဲန့်လေး ရေးထားတဲ့ Document လေးကို တင်ရတယ်? Climate Change မှာ။ ကျနော်တို့ကတော့ လက်ဦးမှုယူပြီးတင်လိုက်တယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့တင်ထားတဲ့ဟာကို ဝဘ်ဆိုက်မှာတင်မပေးဘဲနဲ့ စကစ (စစ်ကောင်စီ) က တင်လာတဲ့ဟာကိုပဲ ဝဘ်ဆိုက်မှာတင်ပေးထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့အရင်ခန့်ထားတဲ့ Focal Person ကတင်တာကလွဲရင် ဘယ်သူလာတင်တင် သူတို့ကလက်မခံတာ။ အထဲကစာတွေက တထပ်တည်းလို တူတယ်ပေါ့နော်။ ဘာတွေ ကွာသွားသလဲဆိုရင် ပထမကနဦးစာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ ဥယျောဇဉ်တို့ဘာတို့ ကွာသွားတယ်ပေါ့။ နောက် ဒုတိယတပိုင်းကကျတော့ တချို့ အပိတ်ပိုင်းလေးတွေက မထည့်ဘူးပေါ့၊ အဲလိုမျိုး ပြင်ဆင်ချက်လေးတွေ နည်းနည်းပါးပါး ရှိတယ်ဆိုတာတော့ သိရတယ်။သို့သော် ကျွန်တော် ဒါသည် အရင် အစိုးရလက်ထက်က၊ ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်က ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။”
ဒီနေရာမှာ စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကို တက်ဖို့ အဖိတ်ခံခဲ့ရပြီးမှ နောက်ဆုံးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းနေပုံကိုလည်း ယူကေဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ် ကိုမောင်မောင်အောင်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့သိရသလောက်ကတော့ ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးက မြန်မာ စကစကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဂလက်စ်ဂိုမှာလာရောက်တည်းခိုဖို့အတွက် ဟိုတယ်စရိတ်တွေဘာတွေ ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ သူတို့ စာပို့တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့သိသလောက်ကတော့ စကစဘက်က ကိုယ်စားလှယ်ငါးယောက်က ဂလက်စ်ဂိုအထိ ရောက်လာတယ်။ တည်းပြီးတော့ ရီဂျစ္စ်တေးရှင်းသွားလုပ်တယ်။ ရီဂျစ္စ်တေးရှင်းမှာက Cancel ဖြစ်နေပြီ။ Cancel ဖြစ်နေတော့ သူတို့ ရီဂျစ္စ်တေးရှင်း လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ခြုံပြီးတော့ ပြောရရင်တော့ တက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ တက်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့အဲဒါ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ COP 26 ထိပ်သီးပွဲကို မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တက်ခွင့် ရမရကို ဗွီအိုအေအနေနဲ့ သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။ တချိန်တည်းမှာ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရနဲ့ စစ်ကောင်စီ သံတမန်အရာရှိကြီးတွေကို ဗွီအိုအေအနေနဲ့ မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည် ဖြေဆိုခြင်း မရှိခဲ့သေးပါဘူးခင်ဗျာ။
ဥတုရာသီ ကုလထိပျသီးညီလာခံနဲ့ မွနျမာပါဝငျမှု
အခု Glasgow မှာ ကငျြးပနတေဲ့ ဥတုရာသီဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂထိပျသီးညီလာခံမှာ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ လိုကျနာဖို့ကတိကဝတျတှကေို ကွိုတငျဆှေးနှေးမှုတှရှေိထားပွီးသားဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ အစညျးအဝေးအတှကျ မွနျမာစဈကောငျစီနဲ့ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရတို့ အပွိုငျအစီရငျခံစာတငျခဲ့ပမေယျ့ စဈကောငျစီအစီရငျခံစာကို အစညျးအဝေးက လကျခံထားပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၃၁ ကစပွီး အခု နိုဝငျဘာ ၁၂ ရကျအထိ UK ကလကျခံကငျြးပပေးနတေဲ့ COP26 (ချေါ) ဒီထိပျသီးပှဲအတှငျး မွနျမာနဲ့ဆိုငျတဲ့ အခွအေနတှေကေို ကိုဝငျးမငျးဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ဒီ ထိပျသီးစညျးဝေးပှဲလကျခံကငျြးပတဲ့ အိမျရှငျ UK နိုငျငံကို သုတသေနအတှကျရောကျနတေဲ့၊ ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဆိုငျရာကြှမျးကငျြသူ စိမျးလမျးအမိမွအေဖှဲ့က အကွီးတနျး အကွံပေး ဦးဝငျးမြိုးသူက မွနျမာနိုငျငံဘကျကအခွအေနကေို အခုလို စရှငျးပွပါတယျ။
“မွနျမာနိုငျငံက အဓိကသကျဆိုငျတာကတော့ NDC လို့ချေါတဲ့ report ကွီးပေါ့ဗြာ။ ကမ်ဘာ့ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှုအပျေါမှာ နိုငျငံအလိုကျတာဝနျယူမယျ့ ဘယျလိုအစီအစဉျတှကေို ရေးဆှဲနပေါတယျဆိုတာမှာ ကနြျောလညျး အစိတျအပိုငျးတခုအနနေဲ့ ပါခဲ့တာတှေ။ အဓိက တပိုငျးကတော့ သဈတောတှေ ပကျြစီးပွုနျးတီးတာကို ထိနျးသိမျးတဲ့အပိုငျး ဒါလြာထားခကျြတှမှောလညျး ၂၀၃၀ မှာ Zero Deforestation လို့ချေါတဲ့ သဈတောပွုနျးတီးမှုကို လုံးဝလြှော့ခသြှားမယျလို့၊ဒီလိုမြိုးလြာထားခကျြဆိုတော့ ဆယျနှဈပဲ ကနျြတော့တာပေါ့ဗြာ။ မွနျမာနိုငျငံက သဈတောပွုနျးတီးမှုမှာ ကမ်ဘာမှာ အခု ၂၀၂၁ ပေါ့ဗြာ၊ မွနျမာနိုငျငံရေးအခွအေနမေပွောငျးလဲခငျတုနျးက အမွငျ့ဆုံး ဖွဈနတေယျ။ အခုလိုမြိုး နိုငျငံရေး အပွောငျးအလဲ ဖွဈသှားတဲ့အခြိနျမှာဆိုရငျ လူတှေ စီးပှါးရေးကသြှားရငျ သဘာဝသယံဇာတပျေါမှာပဲ မှီခိုနရေတဲ့အခါကတြော့ ဒီ သဈတောပွုနျးတီးမှုဟာ ပိုမွနျလာမယျလို့ ယူဆစရာရှိတာဖွဈတဲ့အတှကျ တဘကျမှာ သဈတောပွုနျးတီးမှုကို လြှော့ခမြယျလို့ပွောနတေဲ့အခြိနျမှာ လကျတှမှေ့ာ လိုကျလုပျဖို့ခကျတဲ့၊ ပိုအခွအေနဆေိုးဝါးတဲ့အခွအေနတှေေ ဖွဈလာနိုငျတယျပေါ့။
NUG သယံဇာတနဲ့ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာ တူးခေါငျကတော့ မွနျမာစဈကောငျစီတကျခှငျ့မရဖို့ အရငျအစီရငျခံစာ စတငျကတညျးက ကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့ ခကျခဲခဲ့ပုံကို အခုလို ရှငျးပွပါတယျ။
“COP26 က ကနြျောတို့ ဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ကတော့ အတတျနိုငျဆုံးတော့ Credential Issue ကွိုးစားထားတာ ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ COP 26 ရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးအရပေါ့နျော- နိုငျငံရေးနဲ့ဆိုငျတဲ့ပှဲ မဟုတျတဲ့အခါကတြော့ ကနြျောတို့မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျပွီးတော့မှ Focal Person သူတို့ရှိတယျလေ။ အဲဒီ Focal Person က Non-CDM ဖွဈတဲ့အခါကတြော့ သူတို့ရဲ့ System မှာကအဲဒီ Focal Person ကနေ ပေးပို့တဲ့စာကိုပဲ လကျခံတယျ။ အဲဒီအခါကတြော့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ကတော့ ကွိုးစားပမေယျ့လို့အခကျအခဲလေးတှတေော့ ရှိသှားတာပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ အဘကျဘကျကနေ အားလုံးကတော့ ဝိုငျးပွီးတော့ ကွိုးစားပေးကွပါတယျ။ CSO တှေ၊ နောကျပွီးတော့ နိုငျငံတကာရောကျတဲ့မွနျမာတှေ။ သီးသနျးဒီ (NUG) နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနကနေ ခနျ့ထားတဲ့ အစုအဖှဲ့တှေ ကွိုးစားလုပျဆောငျထားတာတှလေညျး ရှိတာပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ သမ်မတကွီးပေါ့-ယာယီသမ်မတအနနေဲ့ Statement ထုတျတဲ့သဘောမြိုးတော့ ကနြျောတို့ ကွိုးစားထားတာ ရှိပါတယျ။
အဲဒီတော့ အသေးစိတျ အစီရငျခံစာတှေ ဖွဈခဲ့ပုံကိုလညျး NUG ပတျဝနျးကငျြဝနျကွီးရဲ့ အမညျမဖျောလိုသူ နညျးပညာအကွံပေးက အခုလို ဆကျရှငျးပွပါတယျ။
“UNFCCC ရဲ့ System ကွီးမှာ NDC လို့ချေါတဲ့ Nationally Determined Contribution ဆိုပွီးကာမှ နိုငျငံတှကေနေ ကိုယျတှလောလုပျမယျဆိုတဲ့ ကှနျမဈမဲနျ့လေး ရေးထားတဲ့ Document လေးကို တငျရတယျ? Climate Change မှာ။ ကနြျောတို့ကတော့ လကျဦးမှုယူပွီးတငျလိုကျတယျ။ သို့သျော ကနြျောတို့တငျထားတဲ့ဟာကို ဝဘျဆိုကျမှာတငျမပေးဘဲနဲ့ စကစ (စဈကောငျစီ) က တငျလာတဲ့ဟာကိုပဲ ဝဘျဆိုကျမှာတငျပေးထားတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့အရငျခနျ့ထားတဲ့ Focal Person ကတငျတာကလှဲရငျ ဘယျသူလာတငျတငျ သူတို့ကလကျမခံတာ။ အထဲကစာတှကေ တထပျတညျးလို တူတယျပေါ့နျော။ ဘာတှေ ကှာသှားသလဲဆိုရငျ ပထမကနဦးစာမကျြနှာတှဖွေဈတဲ့ ဥယြောဇဉျတို့ဘာတို့ ကှာသှားတယျပေါ့။ နောကျ ဒုတိယတပိုငျးကကတြော့ တခြို့ အပိတျပိုငျးလေးတှကေ မထညျ့ဘူးပေါ့၊ အဲလိုမြိုး ပွငျဆငျခကျြလေးတှေ နညျးနညျးပါးပါး ရှိတယျဆိုတာတော့ သိရတယျ။သို့သျော ကြှနျတျော ဒါသညျ အရငျ အစိုးရလကျထကျက၊ ပွညျသူ့အစိုးရလကျထကျက ရေးဆှဲခဲ့တာဖွဈတယျ။”
ဒီနရောမှာ စဈကောငျစီကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ ဒီထိပျသီးအစညျးအဝေးပှဲကို တကျဖို့ အဖိတျခံခဲ့ရပွီးမှ နောကျဆုံးတကျဖို့ အခှငျ့အလမျးနညျးနပေုံကိုလညျး ယူကဆေိုငျရာ NUG ကိုယျစားလှယျ ကိုမောငျမောငျအောငျက အခုလို ရှငျးပွပါတယျ။
“ကနြျောတို့သိရသလောကျကတော့ ဧညျ့ခံကွိုဆိုရေးက မွနျမာ စကစကိုယျစားလှယျတှကေို ဂလကျဈဂိုမှာလာရောကျတညျးခိုဖို့အတှကျ ဟိုတယျစရိတျတှဘောတှေ ထုတျပေးဖို့ဆိုပွီးတော့ သူတို့ စာပို့တယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့သိသလောကျကတော့ စကစဘကျက ကိုယျစားလှယျငါးယောကျက ဂလကျဈဂိုအထိ ရောကျလာတယျ။ တညျးပွီးတော့ ရီဂစ်ြဈတေးရှငျးသှားလုပျတယျ။ ရီဂစ်ြဈတေးရှငျးမှာက Cancel ဖွဈနပွေီ။ Cancel ဖွဈနတေော့ သူတို့ ရီဂစ်ြဈတေးရှငျး လုပျလို့မရဘူးပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ ခွုံပွီးတော့ ပွောရရငျတော့ တကျလို့မရဘူးပေါ့ဗြာ။ တကျခှငျ့မရခဲ့ဘူး။ ကနြျောတို့အဲဒါ သိရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီ COP 26 ထိပျသီးပှဲကို မွနျမာစဈကောငျစီကိုယျစားလှယျတကျခှငျ့ ရမရကို ဗှီအိုအအေနနေဲ့ သီးခွားအတညျပွုနိုငျခွငျးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ တခြိနျတညျးမှာ စဈကောငျစီပွောခှငျ့ရနဲ့ စဈကောငျစီ သံတမနျအရာရှိကွီးတှကေို ဗှီအိုအအေနနေဲ့ မေးမွနျးခဲ့ပမေယျ့ ပွနျလညျ ဖွဆေိုခွငျး မရှိခဲ့သေးပါဘူးခငျဗြာ။
#MyanmarCOP26 #MyanmarClimateChange #VOABurmdse
ဥတုရာသီ ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ တရုတ် အမေရိကန် သဘောတူညီချက်